မနာလိုဝန်တိုခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » မနာလိုဝန်တိုခြင်း
Posted by Pye Kun Zaw on Jul 10, 2012 in Think Tank | 17 comments
မနာလိုဝန်တိုခြင်းတဲ့.. မနာလိုတာကတော့ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူအပေါ်မှာဖြစ်တာပါ.. ၀န်တိုတာကတော့ ကိုယ်ထက်နိုမ့်ကျတဲ့သူကို ကိုယ့်ဆီကပစ္စည်းဥစ္စာ ရာထူးနေရာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွဲမပေးလိုခြင်း တချိန်ကျကိုယ့်ထက်သာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့သဘောပါ။ က္ကသာ(မနာလိုခြင်း) မစ္ဆရိယ(၀န်တိုကပ်စေးနည်းခြင်း) ဆိုပြီးတော့ ပါဠိအခေါ်ကို အရပ်ထဲမှာလည်းသုံးကြပါတယ်။
အဘိဓမ္မာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာက က္ကသာ မစ္ဆရိယအကြောင်းသင်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ မိမိနှင့်နီးစပ်တဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များကြောင်း ကန်စွန်းရွက်ရောင်းတဲ့သူက ကန်စွန်းရွက်သည်အချင်းချင်းမှာဘဲ ဒီစိတ်အဖြစ်များကြောင်း.. ကိုယ်နှင့်နီးကပ်တဲ့သူအမျိုးအဆွေ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာဘဲ အဖြစ်များကြောင်း ကန်စွန်းရွက်သည်က ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးအပေါ်ဖြစ်ဖို့နည်းသလို သူစိမ်းတရံစာ တွေအပေါ်မှာလည်း မိတ်ဆွေအရင်းအချာနှင့်ယှဉ်ရင်ဖြစ်ဖို့နည်းပါတယ်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမှီအခိုကျေးဇူးရှိကြသူအချင်းချင်း အဖြစ်များတာကြောင့်မဖြစ်သင့်မရှိသင့်တဲ့ မကောင်းသောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
က္ကသာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ မုဒိတာ(ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူအပေါ်ဝမ်းမြောက်စိတ်) ဖြစ်ပြီး.. မစ္ဆရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ကောင်းကတော့ ဂရုဏာ(နိုမ့်ကျသူအပေါ်သနားညာတာစိတ်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာစာရေးဆရာမကြီး မိုးမိုး(အင်းလျား)ရဲ့ အိမ်နီးချင်းဆိုတဲ့ဝတ္တုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်စဉ်းစာမိပါတယ်.. ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစ်စုနှင့် သာမန်မိသားစုတစ်စုအိမ်ချင်းကပ်ရပ်နေကြပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဟာ အိမ်နီးချင်းမိသားစုအပေါ်မှာ အလွန်ဂရုဏာထားစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ငွေကြေးမပြေလည်ရင်ချေးငှား အိမ်မှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်တဲ့နေ့ဆို ဟိုဘက်မိသားစုကကလေးတွေကိုခေါ်ကျွေးလုပ်ပါတယ်။ တီဗွီတွေစပေါ်စမှာ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုဟာ ဦးဦးဖျားဖျားဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုဘက်မိသားစုကကလေးတွေဟာ အထူးအဆန်းတီဗွီကိုကြည့်ချင်တာကြောင့် သူတို့အိမ်မှာညနေဆိုအမြဲလာနေ မိုးချုပ်မှပြန်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေအပေါ်မှာငြိုငြင်မှုမရှိဘဲ မုန့်တွေကျွေးထမင်းတွေကျွေးနှင့် ဆက်ဆံရေးအင်မတန်ကောင်းခဲ့တဲ့ မိသားစုနှစ်စုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ မချောင်လည်တဲ့မိသားစုဟာ ကံကြမ္မာကောင်းတစ်ခုကြောင့် အိမ်နီးချင်းမိသားစုချမ်းသာတာထက်ပိုပြီးချမ်းသာလာပါတယ်။ သူတို့ပိုက်ဆံရှိလာတော့ အရင်ကလိုကလေးတွေဟိုဘက်အိမ်ကိုတီဗွီသွားကြည့်စရာမလိုအောင် သူတို့ကိုယ်ပိုင်အသစ်တလုံးဝယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတီဗွီဟာ ဟိုမိသားစုမှာရှိတဲ့ဟာထက်ပိုကောင်းပြီး ပိုလည်းကြီးပါတယ်။ အစစအရာရာဟိုဘက်မိသားစုထက်သာသွားသလိုဖြစ်လာတော့ အရင်ချမ်းသာခဲ့တဲ့မိသားစုဘက်က ဆက်ဆံရေးအေးခဲလာပါတော့တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ဟိုမိသားစုကမခေါ်တော့ သူတို့လည်းဘာအရေးလည်းသဘောမျိုးနှင့် အရင်ချစ်ခင်ခဲ့ကြတဲ့မိသားစုနှစ်စု ကွဲပြားသွားပုံကို ဆရာမကြီးက အင်မတန်စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရေးအသားတွေနှင့် တင်ပြသွားပါတယ်။
ဒီဝတ္တုကနေပြီးတော့ ဂရုဏာစိတ်ဖြစ်လွယ်ပေမယ့် မုဒိတာစိတ်ထားဖို့ခက်ကြောင်း.. မစ္ဆရိယစိတ်ဖြစ်လာရင်မကောင်းမှန်းသိပေမယ့် က္ကသာစိတ်ဖြစ်ပါက ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မကောင်းမှန်းသိဖို့ခက်ကြောင်း.. စဉ်းစားတွေးတော့မိတာလေးတွေပါ..
တစ်နေ့ နှစ်ပုဒ်တဲ့ ဗျိုး .. :grin:
စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေ သိသာအောင် ရေးထားတာလေးကောင်းပါတယ်။
CJ ကြီးတားသလို တစ်နေ့ ၂ ပုဒ်မကျော်အောင် နေ့တိုင်းရေးပေါ့နော်။
ဖြတ်ညှပ်ကပ် ကော်ပီနဲ့ နေရာရတာကို
မနာလိုတာဟာ နီးစပ်တဲ့သူတွေကို အဖြစ်များတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။
လူတန်းစား အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ဆိုပြီးခွဲလိုက်ရင်… ‘D’ Class ကလူတွေက ‘C’ Class ကလူတွေကို မနာလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဆင့်ကျော်ပြီး အေ ကို သွားမနာလိုဖြစ်ခဲပါတယ်။ ပြောရရင် Marketing မှာလဲ အဆင့်အတန်းခွဲပါတယ်… သိချင်ရင် မောင်ဂီ့ကို ဆက်မေးကြတော့….
ဘယ့်နှယ့် …မောင်ဂီ့ က ပါလာရတာတုန်း….
ဘူ ရေးထားသလဲ ကြည့်မိပါတယ်… ကွန်းကွန်းပဲ ….
(ကျနော့်အသိ လားလို့ တခါမေးဖူးပီး ပြန်မဖြေ ခဲ့ဘူး..
သည်နာမည် ရှားလို့ …ဟုတ်မယ်ထင်လို့ပါ …)
ဇဂါးမစပ် ..ကွန်းကွန်းရေ …
သည်ရွာမှာ ထုံးစံလေးက …
ပိုစ့် တခုစီအတွက် ..ပိုစ့်ရေးသူဟာ ကွန်းမန့်မန့်သူတွေကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
ပြန်လည် ပြောကြားသူ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာလေးပါ ကွယ်…
(ကျုပ်သိတဲ့ ကွန်းကွန်း ဆိုရင်ဖြင့်…)
ညည်းကို ကျုပ် မနာလို ဖြစ်နေတယ် အေ့ ….
ကွန်းကွန်းလို့တော့ နာမယ်မှာ တစ်လုံးမှမပါဘူးလားလို့… မေးဖူးလို့လား… မသိလိုက်တာ ဆောရီးပါ… ဟိုတစ်လောက အလုပ်ရှုပ်လို့ ရွာထဲ တစ်လ၊ နှစ်လ လောက် မျက်ချည်ပြတ်သွားတယ်….
နောက်ဆို ဆရာဂျီးလေသံဖျောက်ပြီး ဟုတ်ကဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်ချင့်… စသည်ဖြင့်ပဲ ရေးနိုင်အောင်ကြိုးဇားပါ့မယ်….
စာရေးသူ ကို.. (ကျနော့်အသိသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်)
သူ့နာမည် အလယ်စာလုံးကို ယူပီး ..ကွန်းကွန်းလို့ ကျနော်တို့
မားကတ္တင်း မှာ အဆင့်ခွဲတာ ..နောက်ထပ် ပါရာဒိုင်းတခု ကို
စိတ်မထိခိယက်တဲ့အခါ …အားလည်းအားရင် ရေးတင်ပါဦးမယ်…
ဟုတ်ကဲ့ကွန်းကွန်းပါ ကိုမင်းဇာနည် ခေါ် ဖားသက်ပြင်း ခေါ် အင်ဇာဂီ ခေါ် ဆြာဂီရေ။ ပြန်မမန့်နိုင်တာကလည်း မနေ့ညကတင်ထားလိုက်တာ ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်မှ ၀င်ရေးဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုမနာလိုမဖြစ်ပါနှင့် ဆြာဂီရယ် အားလုံးကဆြာဂီကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတာပါ။
ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောလေးတွေဆိုတော့ ချစ်စမို့ မင်းနားလည်ထားပေါ့ အဲလေ ယောင်လို့ မုဒိတာ မထားနိုင်ရင်တောင် မစ္ဆိရိယစိတ်ကလေးခဏဖယ်ထားပြီး ဥပေက္ခာပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား ;)
သူများအပေါ်မှာ မကောင်းမြင်တဲ့စိတ်၊ မနာလိုစိတ်ရှိတာ အရမ်းကိုဆိုးပါတယ်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ အမြဲ သတိနဲ့ ထိန်းချုပ်ပါတယ်
အားပေးသွားပါတယ် ကွန်းကွန်းရေ…(ဂီဂီ ခေါ်သလို ခေါ်လိုက်တာပါ)။
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုရေ.. ကွန်းကွန်းဆိုတဲ့နံမည်ကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် (ကုန်းကုန်းဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးနော်) ဟီး
ဖြစ်လည်းဖြစ်တတ်တဲ့ ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတဲ့ လူ့လောကသဘာဝလေး
မို့ အားပေးဖတ်ရှု လက်ခံပါတယ်နော်။
ကိုယ်ကဆင်းရဲနေပြီးမှ သူ့ထက်ချမ်းသာလာတာကို မကျေမနပ် မနာလိုဝန်တိုနေတတ်သူတွေလည်းရှိကြပါ တယ် ….. တစ်ချို့ရဲ့ မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေကသိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ် မဖြစ်သင့် မနာလိုသင့် တာကို မနာလိုဖြစ်တတ်ကြတယ် သူရဲ့မနာလိုစိတ်ကြောင့် တဖက်သားမှာ အနေရခက် အထိုင်ရခက်နဲ့ ထိခိုက်စေတာကို သူကမသိဘူး ……. သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတစ်ပါးကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့် အမြဲပူလောင်နေတာကိုလည်း သူ့ကိုယ်သူသတိပြုမိမှာမဟုတ်ဘူး …… ကျွန်မကိုယ်တိုင်မနာလိုစိတ်ရှိတယ် ဒါပေမယ့် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကိုပဲ မနာလိုဖြစ်တယ် မဖြစ်သင့်တာကို မနာလိုလိုက်မဖြစ်တတ်ဘူး ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာတဲ့လူကကားစီးနိုင်တာကို ကိုယ်ကမစီးနိုင်လို့မနာလိုဖြစ်တာ ကိုယ့်အတွက် အရမ်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မယ်မနာလိုခြင်းပါ …… သူယူတဲ့ယောက်ျားချမ်းသာတယ် ငါလည်းဒီလိုယောက်ျားမျိုးရအောင်ယူမယ် ဒါကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း ရုပ်ရည် စိတ်ဓာတ်မတူကြပါဘူး ကိုယ့်ကိုချမ်းသာတဲ့ ယောက်ျားကကြိုက်ဦးမှ ကိုယ်ယူတုန်းကတော့ ချမ်းသာပါရဲ့ကိုယ်နဲ့ရပြီးမှဆင်းရဲသွားမယ် ဆိုရင်ရော …. ဒါကြောင့် မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ မိမိရဲ့အခြေအနေအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီး မနာလိုဖြစ်မှသာ မိမိအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့စေမှာပါ ………
ဒီနေ့တက်သမျှပို့စ်တွေက ရင်ထဲက လတ်တလောခံစားနေရတာကို ရှင်းပြခွင့်ရတဲ့ပို့စ်လေးတွေပါလား ………..
မနာလိုမှုကလူတိုင်းကြုံဖူးတွေ့ဖူးမှာ ပါ မနာလိုမှုကတော့အနည်းအများကြုံဖူးကျမှာပါ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က သာတာနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ဖြစ်တက်ပါတယ် စနိုး ရေးပြီးသားပို့စ် တစ်ခု ရှိတယ် အဲ့ဒိပို့စ်မတင်ရသေးဘူး အဲ့ပို့စ်မှာ စနိုးဘ၀တစ်သက်တာ ခံစားခဲ့ရသမျှ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှ မနာလိုမှုတွေကြောင့်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် စောင့်ဖတ်ပေးကျအုံးနော် ဒီရက်ပိုင်း စနိုးရွာထဲမှာတော်တော်လေးပျော်မိတယ် စာရေးရတာလည်း အရမ်းရေးလို့ကောင်းလာတယ်
ဒီပို့စ်လေး ကို ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ် ။။။။